DMC-LX100GC Lumix Digital Camera - Panasonic
LUMIX Digital Camerab DMC-LX100GC
ဖြန်တီးမှုများကို စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တဒင်္ဂဖြစ်သော အခိုက်အတန့်များကို အနုပညာဖန်တီးမှုများ ဖြစ်လာစေပါသည်။ ကျစ်လစ်ပြည့်စုံသော ဤကင်မရာ၏ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော မှန်ဘီလူးတွေနဲ့ ကြီးမားသော အာရုံခံပစ္စည်းတွေဟာ အကောင်းဆုံးသော ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံရရှိဖို့ ဓာတ်ပုံဖန်တီးသူရဲ့ အကြံညဏ်နှင့် ကိုက်ညီစေရန်အတွက် မြင့်မားသော နည်းပညာနဲ့ analog ဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပေါင်းစည်းထားပါတယ်။
* အမှန်တကယ် ရရှိနိုင်သည့် resolution - 3840 x 2160p
ခံစားမှုအား ဖော်ပြနိုင်သော အလားအလာအသစ်များကို ချဉ်းကပ်နေပါသည်
4/3 လက်မရှိသော အာရုံခံနိုင်စွမ်း မြင့်မားသည့် MOS Sensor
DMC-LX100 အား ၄င်းတို့၏ ပင်ကိုအလှမှတစ်ဆင့် အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ကောင်းမွန်သော အထိအတွေ့အား သရုပ်ဖော်ပြနိုင်ရန် ဖန်တီးပြုလုပ်ထားပါသည်။ ၄င်းတွင် များစွာသော ရှုထောင့်အချိုးများပါဝင်သည့် ကြီးမားသော 4/3 လက်မ ရှိသည့် အာရုံခံနိုင်စွမ်း မြင့်မားသော MOS အာရုံခံကိရိယာအား အသစ်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ Resolution အား 12.8-megapixel* တွင်ထားခြင်းဖြင့် ( 4:3 ဆက်တင်တွင်) S/N အချိုးအား တိုးမြှင့်စေရန်အတွက် အလင်းပမာဏကို ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ISO25600 တွင် ရိုက်လျှင် အနည်းဆုံးဆူညံမှုရှိပြီး ပြတ်သားသော ဓာတ်ပုံများကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ကျစ်လစ်ပြည့်စုံသော ကိုယ်ထည်နှင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးရရှိနိုင်သော DMC-LX100 ကို သင်သွားသည့် နေရာတိုင်းသို့ ယူသွားပါ။
*အာရုံခံ၏ စုစုပေါင်း pixel ပမာဏသည် 16.8-megapixel ဖြစ်သည်။
ကြီးမားထူးကဲသော မှန်ဘီလူများ၊ ကျစ်လစ်ပြည့်စုံသော ကိုယ်ထည်
အသစ်ဖန်တီးထားသော LEICA DC VARIO-SUMMILUX Lens မှ F1.7-2.8 ထိ ရှိသော တောက်ပမှု၊ မြင့်မားသည့် အမြန်နှုန်း၊ မြင့်မားသည့် အသေးစိတ်ရိုက်ကူးနိုင်မှု၊ အစွန်းမှ အစွန်းသို့ မြင့်မားသော resolution ရရှိခြင်းကို ဂုဏ်ယူပါသည်။ မှန်ဘီလူးတစ်ခုတွင်2ED မှန်ဘီလူး 2ခုအပါအဝင် အဝိုင်းမှန်ဘီလူး5ခုနှင့် အုပ်စု 8 ခုမှ အစိတ်အပိုင်း 11 ခု ပါဝင်ပါသည်။ ကင်မရာကိုယ်ထည်အတွင်းသို့ ကြီးမားသော 4/3 လက်မ Sensor ထည့်သွင်းနိုင်စေရန်အတွက် Panasonic မူလ ဗဟိုပြု နည်းပညာက မှန်ဘီလူးများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်ရရှိထားသည့် ပြတ်သားမှုကို တိုးမြှင့်ထားသလို တည်ဆောက်ပုံအသစ်ကလည်း မှန်ဘီလူးအုပ်စု တစ်ခုလုံးကို ရွေ့လျားနိုင်စရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အဆိုပါ မှန်ဘီလူးက ကြီးမားသော အာရုံခံနှင့်အတူ အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် လှပသော မှုန်ဝါးအောင် ပြုလုပ်ခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။
ထူးထူးကဲကဲ ဖန်တီးမှုကောင်းစေသည့် Tool
ကင်မရာ စိတ်ဝင်စားသူများကို ဆွဲဆောင်နိုင်သော ထိန်းချုပ်မှုများ
သင်၏ အလင်းဝင်ပေါက်ထိန်းချုပ်သည့် အကွင်းအား ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် လှည့်ပြီး Shutter အမြန်နှုန်း ဒိုင်ခွက်အား ညာဘက်လက်ဖြင့် လှည့်ပါ။ ထိုထိန်းချုပ်မှုနှစ်ခုသည် ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးသည့် exposure ကို ချိန်ညှိပေးပါတယ်။ ထို့နောက် ကင်မရာကို ချိန်ညှိပြီး 2,764k-dot နှင့် ညီမျှသော resolution မြင့်မားသည့် LVF (Live View Finder) ထဲသို့ ကြည့်ပါ။ သင့်ညာဖက်လက်အား exposure ပြန်ထေပေးသည့် ဒိုင်ခွက်ပေါ်တွင် တင်ရုံလေးတင်ထားပါ။ DMC-LX100 ဖြင့်ဆိုလျှင် ဓာတ်ပုံရိုက်သူနှင့် ကင်မရာက လျှင်မြန်စွာ တစ်သားတည်း ဖြစ်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အထူးပြုလုပ်ချက်များ ဆုံရာ
ဘက်စုံကောင်းမွန်သော ဖန်တီးမှုပြုလုပ်နိုင်စေသည့် Feature များ
ပိုမိုများပြားသော လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးမှုအတွက် DMC-LX100 တွင် အနုပညာအရည်အသွေးရှိသော ဆောင်ရွက်ချက်များစွာနှင့် ပေါင်းစည်းထားပါသည်။ ၄င်း၏ အပြည့်အဝပွင့်နေသော အလင်းဝင်ပေါက်သည် ဝါးအောင်ပြုလုပ်သည့် အထူးပြုလုပ်ချက်များကို လှပအောင် ဖန်တီးနိုင်ပြီး နှေးကွေးသော Shutter အမြန်နှုန်းသည် ဓာတ်ပုံထဲတွင် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အလင်းရောင်လက္ခဏာအတိုင်း ထားစေနိုင်သလို ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်သော ထိန်းချုပ်မှု filters များကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံစတိုင် ဆောင်ရွက်ချက်၏ အဖြူအမည်း Filter သည် ခံစားမှုရသ ပေါ်လွင်စေတဲ့ အဖြူအမည်း ဓာတ်ပုံပညာကို ရရှိစေနိုင်သလို ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်သော ထ်ိန်းချုပ်မှု filter များသည်လည်း panorama ဓာတ်ပုံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၄င်းတို့နှင့် အခြားသော ဆောင်ရွက်ချက်များကို ပေါင်းစည်းထားခြင်းက သင့်အား အကန့်အသတ်မရှိသော ခံစားမှုရသကို ပေးစွမ်းပါသည်။
ဓာတ်ပုံ၏ ခံစားမှုရသ ပုံစံအသစ်
4K ဗီဒီယိုဖြင့် resolution မြင့်မားသော ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်
အပြင်ကအတိုင်းဖြစ်စေသည့် resolution မြင့်မားသော 4K ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်း*ကို ခံစားလိုက်ပါ။ 8-megapixel နှင့် ညီမျှသော 4K ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းမှတဆင့် ကြည်နှုးဖွယ် အခိုက်အတန့်များကို 3840 x 2160 ဖြင့် ဖြတ်တောက်ရိုက်ကူးစေခြင်းဖြင့် ဖန်တီးမှုမြင့်မားသော 4K အား ကဏ္ဍသစ်တစ်ရပ် ဖွင့်ပေးလိုက်ပါသည်။ 4K ဓာတ်ပုံ mode ကို ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းအတွက် သင့်တော်သော တောက်ပမှုအဆင့် 0-255 သို့ ချိန်ညှိမည်ဖြစ်သည်။ ရှုထောင့်ပြောင်းလဲသည့် ခလုတ်ဖြင့် 16:9 အပြင် 4:3 သို့မဟုတ် 3:2 အား ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
* 4K ဗီဒီယိုများအား 15 မိနစ်လောက်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ 4K ဖြင့် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနေစဉ်တွင် UHS Speed Class3အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကတ်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။
ညက်ညောပြီး လှပအောင်ပြုလုပ်သော အထူးပြုလုပ်ချက်
အသစ်ပြုလုပ်ထားသော LEICA DC VARIO-SUMMILUX မှန်ဘီလူးတွင် အလင်းဆိုင်ရာ ဒီဇိုင်းနှင့် ဝိုင်းသောဖန်သား မှန်ဘီဘူး5ခု၏ ကောင်းမွန်သင့်မြတ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ပါဝင်ပြီး ၄င်းတို့အား Panasonic ၏ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ aspherical မှန်ဘီလူး ပုံသွင်းခြင်း နည်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် မမြင်ရသော အနားကွပ် လိုင်းများနှင့် အကွင်းများ ပြုလုပ်စေနိုင်ခြင်းဖြင့် သင့်ဓာတ်ပုံများတွင် အထင်ကြီးလောက်သော မှုန်ဝါးအောင်ပြုလုပ်သည့် အထူးပြုလုပ်ချက်တစ်ခုနှင့် ရိုက်လိုသောအရာမှာ ထင်းပြီးနောက်ခံကို မှုန်ဝါးစေရန်အတွက် ကြီးမားသော MOS အာရုံခံပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ အသစ်ထည့်သွင်းထားသော အလင်းပေါက်9ခုပါဝင်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းခြား ပစ္စည်းသည် bokeh အား ချောမွတ်ပြီး စက်ဝိုင်းပုံစံ ရရှိနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပါသည်။
The Venus Engine တွင် အရောင်ပြန်လည် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းမြင့်မားစေရန်နှင့် သဘာဝအတိုင်း ဖော်ပြချက်ဖြင့် resolution မြင့်မားသော ဓာတ်ပုံများကို ရရှိစေရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များစွာပြုလုပ်ပေးနိုင်သော NR၊ သုံးဖက်မြင် အရောင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလင်းဝင်ပေါက်ရှိ စစ်ထုတ်မှုပြုလုပ်သည့်အရာတို့ ပါဝင်ပါသည်။ အာရုံခံမှုမြင့်မားသော MOS အာရုံခံကိရိယာများနှင့် Venus Engine ၏ ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော ဓာတ်ပုံသည် D-SLR များမှ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သော ဓာတ်ပုံများကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပါသည်။
များစွာသော ရှုထောင့်အချိုးများ ပါရှိခြင်း
DMC-LX100 တွင် များစွာသော ရှုထောင့်အချိုးဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ LUMIX တွင် ပါဝင်သော ရှုထောင့်ပေါင်းစုံအချိုး ဆောင်ရွက်ချက်သည် သင့်အား တူညီသော မြင်ကွင်းထောင့်တွင် 4:3, 3:2 သို့မဟုတ် 16:9 ရှုထောင့်အချိုးများဖြင့် ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးစေနိုင်သောကြောင့် အမှန်တကယ်ကို is "ရှုထောင့်ပေါင်းစုံ" ဖြစ်ပါသည်။ ရှုထောင့်အား မှန်ပြောင်းပေါ်တွင်ရှိသော ရှုထောင့်ခလုတ်ဖြင့် လျှင်မြန်စွာ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
3cm Macro ရိုက်ကူးခြင်း
အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ကောင်းမွန်တဲ့ macro ရိုက်ချက်များအား အနည်းဆုံး focus ပြုလုပ်နိုင်သော အကွာအဝေးဖြစ်သည့် 3cm (wide) နှင့် 30cm (tele) ဖြင့် ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ပန်းများ၊ အင်းဆက်များ စသည်တို့ကို လက်ဖျားခါလောက်အောင် အသေးစိတ် ဖော်ပြဖို့အတွက် DMC-LX100 နှင့် အနီးကပ်ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ POWER O.I.S. (Optical Image Stabilizer) သည် လက်တုန်ခြင်းအတွက် ထိရောက်စွာ ပြန်လည်ဖာထေးပေးနိုင်ပါသည်။
Analog ပုံစံ ဆောင်ရွက်ချက်
ခေတ်မီဓာတ်ပုံဆရာများရဲ့ အလားအလာကို ချဲ့ထွင်နိုင်စေရန်အတွက် DMC-LX100 တွင် ခေတ်မီဆောင်ရွက်ချက်များစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ၄င်းသည် အလင်းဝင်ပေါက်ထိန်းချုပ်သည့် အကွင်း၊ zooming သို့မဟုတ် focus ပြုလုပ်ရန်အတွက် ထိန်းချုပ်သည့်ကွင်း၊ Shutter အမြန်နှုန်းများနှင့် exposure ဒိုင်ခွက်များကဲ့သုိ့ သတ်မှတ်ထားသော အကွင်းများနှင့် ဒိုင်ခွက်များနှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် အလိုအလျှောက် ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့ကို ခွင့်ပြုပါသည်။
2,764k-dot နှင့် ညီမျှသော Resolution မြင့်မားသော LVF
DMC-LX100 တွင် 2,764k-dot နှင့် ညီမျှသည့် မြင့်မားသော resolution နှင့် ခန့်မှန်းခြေ 100% အရောင်ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း*တို့အား LVF (Live View Finder) နှင့် ပေါင်းစည်းထားပါသည်။ ၄င်းသည် ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်အောက်တွင်ပင် တည်ငြိမ်သော framing နှင့် ထိပ်တန်းမြင်ကွင်းကို အာမခံနိုင်ပါသည်။ LVF ကို သင်ကြည့်လိုက်သည်နှင့် မျက်လုံးအာရုံခံAF မှ စတင် focus ပြုလုပ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ်သော မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမှ သင့်အနေဖြင့် ဆုံးရှုံးမည်မဟုတ်ပါ။ 3.0-လက်မ 921k-dot အနောက်ဘက်တွင် တပ်ဆင်သည့် မော်နီတာကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
* Adobe RGB color space ပေါ်တွင် အခြေခံပြီး CIE 1931 x, y color space ပေါ်တွင် အခြေခံသည့် Panasonic ကုမ္ပဏီတွင်း နှိုင်းယှဉ်ချက်
DFD နည်းပညာနှင့် အလင်း၏ အမြန်နှုန်းရှိသော AF
DFD (Depth From Defocus) နည်းပညာအသစ်သည် focus ပြုလုပ်ရန်ကြာသည့်အချိန်ကို တိုစေပါတယ်။ ၄င်းသည်ရိုက်လိုသော အရာဝတ္ထု၏ အကွာအဝေးအား မတူညီသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အဆင့်နှစ်ခုရှိသော ရုပ်ပုံနှစ်ခုကို ချင့်တွက်ခြင်းဖြင့် တစ်ပြိုင်နက် တွက်ချက်ပါသည်။ ရလာဒ်အနေနဲ့ ခန့်မှန်းခြေ 0.14 sec* နှင့် အလွန်အမင်း လျှင်မြန်တဲ့ AFကို ရရှိပါသည်။
* CIPA စံနှုန်းများ zoom အနေအထားသည် wide range တွင် ရှိနေပါသည်။ Live View Finder ကို အသုံးပြုချိန်
လျှင်မြန်သော Shutter အမြန်နှုန်း
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှတ္တာနှင့်အတူ အများဆုံး ရှတ္တာအမြန်နှုန်း 1/4000 စက္ကန့် ရှိခြင်းကြောင့် လျှင်မြန်စွာ ရွေ့လျားနေသော အရာဝတ္ထုများအား စိတ်ကူးရသည်နှင့် ကောက်ကာငင်ကာ ရိုက်ကူးစေနိုင်ပါသည်။ အများဆုံး 1/16000 စက္ကန့်ရှိခြင်းကြောင့် သင့်အား အပြင်ဖက်မှာတောင် အလင်းတံခါးကို ဖွင့်စေနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သော နေရောင်ခြည်အောက်မှာတောင် နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်သော အကွက်များကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
11 fps ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးခြင်း
လျှင်မြန်သော ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးခြင်းအား 11 fps တွင် resolution ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ လျှင်မြန်စွာ စတင်နိုင်ခြင်းနဲ့အတူ မှန်ဘီလူးထွက်သည့်အချိန် တိုခြင်း DMC-LX100 ကြောင့် သင့်အနေဖြင့် တဒင်္ဂအတွင်းရိုက်ရမည့် အခွင့်အရေးများကို သေချာပေါက် ရိုက်နိုင်ပါသည်။
ထိန်းချုပ်သည့် အကွင်း ဖြင့် Focus Peaking ဆောင်ရွက်ချက်
ထိန်းချုပ်သည့်အကွင်းသည့် စိတ်ကြိုက် focus ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ focusing နှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပို၍လက်တွေ့ဆန်သော ထိန်းချုပ်ခြင်းအတွက် Focus Peaking ဆောင်ရွက်ချက်များသည် MF နှင့် AF+MF mode များတွင် foucs ပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ အထွတ်အထိပ်ကို ပြသပါသည်။ Focus Peaking လုပ်ဆောင်ချက်အား Wi-Fi* မှတစ်ဆင့် အဝေးမှ ဓာတ်ပုံ/ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်းအတွက်လည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Level Gauge သည် ပုံအား ဖွဲ့စည်းရာတွင် အဆင့်ပြုလုပ်ရန် အဆင်ပြေစေသည့် အလျားလိုက်/ဒေါင်လိုက် မြင်ကွင်းထောင့်ကို ကင်မရာအား ခြေရာခံနိုင်စေပါသည်။
Aspect Bracket ဆောင်ရွက်ချက်သည် ကင်မရာအား ရှုထောင့်အချိုးဖြစ်သည့် 4:3, 3:2, 16:9 and 1:1 အားလုံးကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ရိုက်ကူးစေနိုင်ပါသည်။
digital ဓာတ်ပုံပညာ၏ အကျိုးကျေးဇူးဖြင့် Shutter တစ်ကြိမ် လွတ်ချိန်တွင် မတူညီသော အဖြူရောင်မျှခြေ ကန့်သတ်ချက်ဘောင်ရှိသော ဓာတ်ပုံ3ပုံ ရိုက်ကူးနိုင်စေသည့် WB (အဖြူရောင်မျှခြေ) bracket အား ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံစတိုင်ထဲမှ အဖြူအမဲ Filter (Ye/Or/R/G) သည် အဖြူအမဲ ဓာတ်ပုံများ၏ ကန့်သတ်ထားသော အရောင်အသွေးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကြွယ်ဝသော ခံစားမှုကို ဖန်တီးပါသည်။
Exposure များစွာ ပါဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘောင်တစ်ခုတည်းတွင် Exposure လေးခု ရိုက်နိုင်စေပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် တူညီသောဘောင်တွင် မပေါ်သည့် အရာများကို အဆင့်ဆင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်ခြင်း / မှုန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ခြင်းအား ဓာတ်ပုံလုပ်ငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် အသုံးမပြုပဲ အလိုရှိသော ဓာတ်ပုံရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ှလက်ရှိ ပုံစံ 3ခု (Higher Contrast, Lower Contrast, Brighten Shadow) အပြင် ဆက်တင်ပုံစံ3ခုအား စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
DMC-LX100 သည် အောက်ပါ ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိရန်အတွက် ကင်မရာအတွင်းတွင် RAW-format ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Color Space Setting (sRGB / AdobeRGB), White Balance, Exposure Compensation, Photo Style, Intelligent D-range Control, Contrast, Highlight / Shadow, Saturation, Noise Reduction, Intelligent Resolution, Sharpness
ဖန်တီးမှု ကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်မှု/ဖန်တီးမှု ကောင်းမွန်သော Panorama
ဖန်တီးမှုကောင်းမွန်သော ထိန်းချုပ်မှု Filter သည် ဓာတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုများသို့ အနုပညာရှင်ဆန်သော ခံစားမှုရသနှင့် မူလ ခံစားမှုရသများကို ထည့်သွင်းစေနိုင်ပါသည်။ အခုအချိန်တွင် P/A/S/M အနေအထားများမှာ ရှိနေလျှင်ပင် ထို filter တွေထဲက တစ်ခုခုကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မျက်နှာပြင်ကို တစ်ချက်ထိလိုက်ပြီး ကင်မရာကို ဆုံလည်လှည့်လိုက်ရုံဖြင့် ဒေါင်လိုက်/အလျားလိုက် Panorama ဓာတ်ပုံများကို ဖန်တီးစေနိုင်ပါသည်။
[Filter အထူးပြုလုပ်ချက်] Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Monochrome, Dynamic Monochrome, Rough Monochrome, Silky Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect, Toy Pop, Bleach Bypass, Miniature Effect, Soft Focus, Fantasy, Star Filter, One Point Color, Sunshine.
• ရရှိနိုင်သော အထူးပြုလုပ်ချက်များသည် ဓာတ်ပုံရိုက်သည့် အနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
NFC အသုံးပြုနိုင်သော စမတ်ဖုန်း/တက်ဘတ်အား ကင်မရာနှင့် ထိလိုက်ရုံဖြင့် သို့မဟုတ် QR ကုဒ်အား စကင်ဖတ်ခြင်းဖြင့် Wi-Fi * အား ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။
ချဲ့ထွင်ခြင်းအတွက် များပြားသော ရွေးချယ်စရာများ
ကင်မရာ ကိုယ်ထည်နှင့် အရောင်တူသော လက်တွေ့ကျသော ပြင်ပ flash unit (GN10 ISO200・m / GN7 ISO100・m) အား DMC-LX100 တွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ သီးသန့်ဝယ်ယူထားသော DMW-FL360L / FL580L နှင့်အတူ ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် LED ဗီဒီယို အလင်းရောင် လုပ်ဆောင်ချက်များလည်း ရရှိနိုင်ပါတယ်။ shoe ပေါ်တွင် DMW-VF1 OVF (Optical View Finder) အား တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
4K Video နှင့် 1920 x 1080p Full-HD Video
DMC-LX100 တွင် ထူးခြားကောင်းမွန်သော 4K ဗီဒီယို ရိုက်နိုင်သည့် အင်္ဂါရပ် ထည့်သွင်းထားပါသည (QFHD 4K:် 3840 x 2160, 25 fps / 24 fps in MP4)။ သင့်အနေဖြင့် 4K ဗီဒီယိုအား လျှင်မြန်သော ဆက်တိုက်ရိုက်ချက်များအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို 8-megapixel resolution နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ DMC-LX100 full-HD 1920 x 1080 50p ဗီဒီယိုများအား AVCHD Progressive format သို့မဟုတ် MP4 format ဖြင့် ထောက်ပံ့ပါသည်။
• 4K ဗီဒီယိုများအား 15 မိနစ်လောက်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ 4K ဖြင့် ဗီဒီယိုများ ရိုက်ကူးနေစဉ်တွင် UHS Speed Class3အဖြစ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ကတ်တစ်ခုကို အသုံးပြုပါ။
• AVCHD တွင်ရှိသော လှုပ်ရှားဓာတ်ပုံများအား 29 မိနစ်နှင့် 59 စက္ကန့်အထိ ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
• MP4 (FHD/HD/VGA) တွင်ရှိသော လှုပ်ရှားဓာတ်ပုံများအား 29 မိနစ်နှင့် 59 စက္ကန့်အထိ သို့မဟုတ် 4GB ၏အထိရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။
ကိုင်တိုင်ပြုလုပ်ရသော ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်း
DMC-LX100 သည် သင့်အား အလင်းဝင်ပေါက်နှင့် Shutter အမြန်နှုန်းကို ကိုယ်တိုင်ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် ခံစားမှုရသပါဝင်သော ဗီဒီယိုရိုက်ကူးခြင်းများကို ခံစားနိုင်စေပါသည်။ ထို့ပြင် သင့်အနေဖြင့် ဖန်တီးထိန်းချုပ်ခြင်း filter ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့်ဗီဒီယိုများတွင် မတူညီသော အနုပညာအရည်အသွေးပြသသည့် အထူးပြုလုပ်ချက်များကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
နက္ခတ္ထဗေဒ လေ့လာခြင်း၊ ပန်းများပွင့်လန်းလာခြင်း သို့မဟုတ် တိမ်တိုက်များ တရိပ်ရိပ်လွင့်နေခြင်းကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်သည့် အရာဝတ္ထုများကို ရိုက်ကူးခြင်းအတွက် ကင်မရာအား ဒီအတိုင်းထားထားပါ။ ပုံမှန်ထက်အရှိန်နှေးထားသော ဗီဒီယိုတစ်ခု ရိုက်ကူးရန်အတွက် အခန်းဆက်အလိုက် ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံစီးရီးများကို ကင်မရာထဲတွင် ပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်။
ရိုက်ချက်နှစ်ခုအား ဆက်ခြင်းဖြင့် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဖြစ်စေခြင်း
ရိုက်ချက်နှစ်ခုအား ဆက်ခြင်းဖြင့် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဖြစ်စေခြင်း function သည် အရာဝတ္ထုအား ဒီဂရီအလိုက်ရွေ့နေစဉ်တွင် ကင်မရာထဲရှိ အခန်းဆက်အလိုက်ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံများအား stop motion (stop ဖရိမ်) ဗီဒီယိုကို ရရှိစေပါသည်။ုထို effect အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အရာဝတ္ထုသည် သူ့ဘာသာသူ ရွေ့လျားနေသလို ထင်ရပါမည်။
ဖန်တီးမှုများကို စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်ထားသည့် LUMIX LX100
LUMIX LX100 4K နမူနာ Video
LUMIX LX100 ထုတ်ကုန် မိတ်ဆက်သည့် Video
4K Photo Explanation Video 4K
ဗီဒီယိုမှ ရုပ်ငြိမ်ဓာတ်ပုံများကို ထည့်ခြင်းဖြင့် အမှတ်တရ အခိုက်အတန့်များကို ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။